गुरुराज घिमिरे र भूपेन्दजंग शाहीको हारले कांग्रेसमा युवा नेतृत्व अझै कठिन - Media Dabali
काठमाडौं - नेपाली कांग्रेस १४औं महाधिवेशन उदघाटनको पूर्वसन्ध्यामा छ । अबको तीन दिनपछि काठमाडौंमा महाधिवेशन उद्घाटन हुँदैछ ।
महाधिवेशनमा सहभागी हुन जिल्ला जिल्लाबाट प्रतिनिधि काठमाडौं आउन थालिसकेका छन् । महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा कस्तो नेतृत्व आउला भन्ने बहस चलिरहेका बेला दुई युवा नेताको पराजयले नेता कार्यकर्तामा गम्भीर चिन्ता देखिएको छ ।
प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेश सभापतिमा क्रमशः गुरुराज घिमिरेको पराजयले नेपाली कांग्रेसमा युवा नेतृत्व अहिले नै सम्भव नरहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
घिमिरे र शाहीलाई नेपाली कांग्रेसमा तुलनात्मक रूपमा अन्य युवा नेताभन्दा विचार र पार्टीको धारणा राम्रोसँग राख्न सक्ने युवा नेता मानिन्छ । घिमिरे नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष र शाही नेविसंघको उपाध्यक्षका साथै तरुण दलका पूर्वमहामन्त्रीसमेत हुन् ।
तर, दुवै नेतालाई पाका कांग्रेस नेताहरूले निर्वाचनमा हराइदिए । यसले गर्दा अझै पनि कांग्रेसमा युवा नेतृत्व तत्काल आउन कठिन हुने हो कि भन्ने विश्लेषण र बहस सुरु भएको हो ।
यदि घिमिरे र शाही सभापतिमा निर्वाचित भएका भए गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल, कल्याणकुमार गुरुङ, जितजंग बस्नेत, उदयशमशेर राणालाई निकै सहज हुने थियो ।
यी युवा नेताहरू कोही पदाधिकारी र कोही केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी छन् । महाधिवेशनमा युवा नेतृत्व ल्याउन अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कांग्रेस प्रदेश १ को सभापति र महामन्त्रीमा यस्ता छन् उम्मेदवार, कसले मार्ला बाजी ?
कांग्रेस प्रदेश सभापतिमा ८०० मत गणना हुँदा गुरुराज घिमिरे कति अगाडि ?
दुई र एक मतले हार्ने यी अभागी कांग्रेस नेता
बुधवार, पौष ७ २०७८०२:३६:५१
# गुरुराज घिमिरे # हृदयराम थानी